ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အိပ်ယာထက်က ပုံလေးတွေကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ – Shwe Yoe
ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အိပ်ယာထက်က ပုံလေးတွေကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
“မနက်ခင်းလေးမှာ နိုးလာခဲ့… အရင်ဆုံး မင်းကို လွမ်းပါတယ်..” ဆိုပြီး အနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးလာတဲ့အချိန်လေးမှာ ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ သူ မရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်. ။ချစ်စရာကောင်းသလို ဆွဲဆောင်မှုတွေလည်း ရှိတဲ့ နန်းခင်လေးရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း သဘောကျနေကြမှာပါနော်..။
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်အချစ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီး ချောလေးကတော့ နန်းခင်ဇေယျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်. .။ကျော့ရှင်းတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟန် ပန်လေးတွေနဲ့ စကားပြောပွင့်လင်းပြီး အနေအေးတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေကြရတာပါ..။
နန်းခင်လေးကတော့ covid ကာလ stay home နေရတဲ့အချိန်လေးမှာ အိမ်မှာနေရင်း သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ် တွေအတွက်လည်း အလွမ်းပြေ လေးဝေမျှထားပါသေးတယ်နော်.. ။အခုတစ်ခါမှာလည်း မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးနိုးချင်းမှာပဲ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတဲ့ အိပ်ယာထက်က သူမရဲ့ညို့အားပြင်းပုံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေပြန်ပါတယ်နော်..။
တင်းရင်းကိတ်လွန်းနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို အထင်သားပေါ်လွင်နေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့ ပုံရိပ်များ